Dhaqtar Shaaciyay sababtii ka dambeesay in Goolhayaha kooxda Liverpool uu sameeyo qaladaad waaweyn kullankii Kiev | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dhaqtar Shaaciyay sababtii ka dambeesay in Goolhayaha kooxda Liverpool uu sameeyo qaladaad waaweyn kullankii Kiev
Dhaqtar ayaa qiimeeyay xaaladda goolhayaha kooxda Liverpool ee Loris Karius kaasi oo bandhig aad u liita sameeyay qaybtii dambe ee ciyaartii ay kooxdiisa la ciyaartay Real Madrid kullankii Final-ka ee tartanka Champions League-ga.
Dhaqtarkan ayaa sheegay in xiddiga reer Germany uu ka cabanayay xanuun dhanka maskaxda ah isla bilawgii qaybtii dambe ee ciyaarta xilli ay isku dhaceen kantanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos kaasi oo xusul madaxa kaga dhuftay daqiiqaddii 48-aad.
Kooxda caafimaadka ayaanan usoo gelin garoonka si ay xaaladdiisa u ogaadaan Loris Karius, sidaas darteed waxa uu ciyaaray isagoo dareemaya xanuun dhank maskaxda ah, taasi oo keentay inuu 2 daqiiqo ka dib kubbad uu damacsanaa inuu dadajiyo uu ku garaacay gooldhaliyaha kooxda Real Madrid ee Karim Benzema kaasi oo Los Blancos u dhiibay hooggaan 1-0 ah.
Dr. Ross Zafonte iyo Dr. Lenore Herget oo ka howl gala isbitaalka Massachusetts General Hospital ayaa soo saaray akhbaar ah in Loris Karius oo dareemayay xanuun dhanka maskaxda ah taasna ay saldhig u ahayd bandhiggii liitay ee habeenkaas uu sameeyay.
Labadan dhaqtar ayaa ku sheegay qoraal dheer oo ay soo saareen in ay tijaabo caafimaad mariyeen 24-jirka reer Germany, isla markaasna ay daawadeen muuqaalladii ciyaartaas uu ku lahaa, waxa ayna baahiyeen inay ogaadeen in goolayaha uu xanuun dhanka maskaxda ah dareemayay wixii ka dambeeyay markii Sergio Ramos uu suxulkiisa ugu dhuftay madaxa